Haweeneey Ku Hadli Karta 18 Luqadood Oo Caddeysay Inay Hore Ugu Noolaan Jirtay Adduunkaan, Imisa Dal Ayey Ku Dhalatay? - Hablaha Media Network
Haweeneey Ku Hadli Karta 18 Luqadood Oo Caddeysay Inay Hore Ugu Noolaan Jirtay Adduunkaan, Imisa Dal Ayey Ku Dhalatay?
HMN:- Haweeneey ayaa sheegtay inay la nooleyd qoom kasta oo ka mid ah 18kii qoom ee adduunka ugu dambeeyey. Waxayna ku hadli kartaa luqaddii ay ku hadli jireen qoom kasta oo ay sheeganeyso inay la nooleyd.
Magaceedu waa Maria Johnsen waxayna daaha ka qaaday inay ku hadli karto 18 luqadood, kuwaasoo ahaa luqadaha afkeeda hooyo ee ay ku hadli jirtay intii ay la nooleyd 18kaas qoom.
Waxay saxaafadda u sheegtay: “Luqadahaani aniga ahaan waxay ii yihiin sida luqado aan garanayo oo aan hore ugu hadli jiray. Ma jiraan wax kale oo aan aaminsanahay”.
Maria waa aasaasaha ahna guddoomiyaha shirkadda Trondheim ee dalka Norway, shirkaddeedu waxay xayeysiin u sameysaa qaabka ay dadku ugu hadli karaan luqado badan. Guddoomiyaha shirkaddaa waa Maria waxayna ku hadli kartaa isla markaana qori kartaa luqadaha English, Norwegian, French, Russian, Chinese, Danish, Swedish, iyo German.
Kuna darso gabadhaani waxay fahamsan tahay luqadaha Bulgarian, Serbian, Persian, Afghan Dari, Arabic, Hindi, Polish, Turkish, Italian iyo Japanese.
Maria ayaa hadalkeeda ku dartay: “Waxaan dareensanahay inay luqadahaani yihiin kuwii aan ku hadli jiray markii aan la noolaa qoomamkii kale ee adduunkaan ku noolaan jiray, sidaas darteed qariib iguma aheyn markii aan si sahal ah ku bartay luqadahaan. Waxaan xitaa u tegay dad cilmu-nafsiga wax ka yaqaanna oo ku sugan America iyo UK waxayna ii sheegeen inaan saxanahay.
“Markii aan bartay luqadahaan waxaan dareemay inaan la noolaan jiray qoomam hore oo ku hadli jiray iyo inaan ku noolaan jiray goobo kale oo adduunkaan ah. Markii aan u safray dalalka kale waxaan dareemay sida inaan hore u joogi jiray dalalkaas haatan ka hor, markii aan la kulmay dalka waxaan dareemay sida inaan hore isku naqaanay. Waana wax cajiib ah.
“Mararka qaar waxaan akhriyaa sheekooyin buugaagta lagu qoray oo ka hadlaya qarniyadii 18aad iyo 19aad, waxayna iila muuqdaan sida sheekooyin aan soo arkay. Mid ayaan aaminsanahay isla markaana aan hubaa. Haddii aan dhinto waan soo noolaan doonaa, waxaana ku noolaan doonaa goob kale oo adduunka ah”.
Maria xitaa waxay sheegtay inay kasoo jeeday Qoys Boqortooyo ah oo degan dalka Russia markii hore ee ay ku noolaan jirtay adduunkaan, waana sababta ay muuqaal ahaan ugu egtahay dadka ku nool Russia.
Miss Johnsen ayaa muddo bil ah ku baratay luqadda China, waxaana dalkaas kusoo dhoweeyey dad aqlaya aragtideeda.